प्रायः सबै मानिस दीर्घजीवन चाहन्छन् । मर्नदेखि सबैलाई डर लाग्छ । “मर्ने कसैको रहर हुँदैन” तर किन व्यक्तिले आत्महत्या गरेर आफ्नो ज्यान÷शरीर आफै समाप्त पार्छ ? यस्तो अवस्थामा पुग्दा पक्कै पनि उसले आफ्नो जीवनका सबै ढोकाहरू बन्द भएको तथा अरु कुनै पनि विकल्पहरू नभेटिएर चरम निरासामा डुबेको हुन पर्दछ ।आत्महत्या व्यक्तिको कमजोरीका
नेपालमा गणतन्त्र सेनाले ल्याएको हो ,माओबादीले होइन ( भिडियो सहित )
पशुपतिनाथ मन्दिरको एउटा पूजारी परिवर्तन गर्न नसक्ने, रुक्मांगत कटुवाललाई हटाउन नसक्ने, नन्दप्रसाद अधिकारीको लाश जलाउन नसक्ने पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र ल्यायो भनेर पत्याउन सकिन्छ २०६३ पछि आम विषय बनेको गणतन्त्र तात्कालिन माओवादीले ल्याएका हुन् भनी धेरैले अड्कल लगाउँछन् । हुनत पुर्वपञ्चहरुको पार्टी वाहेक अन्य सबै राजनीतिक दलहरु आफ्नो हिस्सामा ग
अहिले राष्ट्रपति अर्थात् मदनकी जीवनसंगीनी विद्यादेवी भण्डारी छिन् भने देशको प्रभावशाली नेता मदनका राजनीतिक सहकर्मी केपी ओली नै छन्। प्रधानमन्त्री ओली मदनको हत्याको छानवीन गर्न त्यतिवेला गठित आयोगका अध्यक्ष समेत थिए । स्मरण रहोस् ओलीले कुनै समय भनेका थिए – म प्रधानमन्त्री भएँ भने मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका हत्यारा अवश्य पत्ता लगाउँनेछ
दासढुंगा हत्या घटना भएको आज २६ वर्ष पुगेको छ । तर पनि त्यो घटना रहस्यमय नै छ । त्यो सुनियोजित हत्या थियो या दुर्घटना त्यो भने रहस्यमयकै विषय बनेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा एमाले उपाध्यक्ष एवं मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई-दुई पटक भए तर पनि उनीहरुले यो घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने शब्दको किन उच्चारण समेत गरेनन्
माक्र्सवादी बहस : राम्रो म कोदाली तँ !
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अत्यधिक प्रयोग हुने शब्द हुन् क्रान्तिकारी र संसोधनबादी । आफ्नो परिभाषा गर्न क्रान्तिकारी शब्दको प्रयोग गर्ने र अरुलाई गाली गर्न संसोधनबादी शब्दको प्रयोग गर्ने पुरानो बाम रोग हो । सर्वविदितै छ ,क्रान्तिकारी भन्नाले विद्यमान समाजको राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन संगठित प्रयास गर्ने
माया, प्रेम, दुःख, सुख, आनन्द, चिन्ता, पीर, रिस, डाहा, इस्र्या आदि सबै मानवीय संवेगहरु हुन् । हामीले आफूमा भएका संवेगलाई चिनेर त्यसको सही रूपमाव्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले हाम्रो जीवनमा समस्या निम्त्याउँछ । रिस, चिन्ता, इष्र्या, डाहा जस्ता संवेगलाई सही रूपमा चिन्नर समाधान गर्न सकिएन भने व्यक्तिको आन्तरिक शक्ति खलबलिन पुग्दछ । डर, ईष्र्या, घृणा,
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले धार्मिक भ्रमणमा मधेस यात्रामा छन् । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जँहा जान्छन उनलाई हेर्न , भेट्न र छुनका लागि सर्वसाधारणको ठुलो भिड लाग्ने गर्दछ । भिड नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको दृश्य समेत जताततै देख्न सकिन्छ । प्रशासनले पूर्वराजाको सुरक्षार्थ र भीड नियन्त्रण गर्न ठूलो संख्यामा सु
शक्तिशाली सरकारको निर्णय, विरोध र वास्तविकता
आज हाम्रो देश समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । जसरी देशमा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्न दशकौं संघर्ष गर्नु पर्यो, हजारौंको वलिदान आवश्यक पर्यो त्यसरी नै देशलाई समृद्ध बनाउन ठूलै संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । निःसन्देह, लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष र समृद्धि प्राप्तिको संघर्षको चरित्र एकै प्रकारको हुदैन । १) दीर्घकालीन विकास रणनीति
खुल्ला यौन व्यवहार : छोराछोरी बिहान ढीला उठ्न थाले अभिभावक सजक हुनुपर्छ ( हेर्नुहोस भिडियो )
ठमेलको डान्सबार : डान्सबार अत्यन्त खचाखच छ । १४-१५ का केटाकटीदेखि ४०-४५ उमेर समुहका मानिसहरू छन् । हिन्दी गीतमा उत्तेजक नृत्य गरिरहेका अर्धनग्न डान्सरहरू पालैपालो नाचिरहेका छन् । जब साँझ ढल्कँदै जान्छ तब पहिरन फाल्ने कार्य सुरू हुन्छ । पानी र बियरले भिजेका कपडा र शरिर प्रदर्शन भइरहेछ । नर्तकीहरूका हावभाव अत्यन्त अपिलपूर्ण छ । बाहिरी बस्त्र खुल
एक ‘असामाजिक’ प्राणीको बकपत्र
‘भर्चुअल स्पेस’मा विचरण दशकअघिसम्म चोक–चोक र चियापसलमा खेलिने क्यारमबोर्ड अहिले लगभग लोप भइसकेको छ । क्यारेमका फुर्सदिला खेलाडीले स्वदेशमै रोजगार पाएर वा कतार–मलेसिया पलायन भएका कारण क्यारम लोप भएको पक्कै होइन । कोठा, चोक वा मैदानमा हात र खुट्टा चलाएर खेलिने खेल अब किबोर्ड वा टचस्क्रिनमा औँला चलाउँदै ‘भर्चुअल स्पेस&rs